Umqondo "ngabanye-alpha" "i-alpha besilisa" futhi "-alpha besifazane" waqamba ethologists - ososayensi abatadisha ukuziphatha izilwane ahamba njengamaqembu. Ngokokuqala ngqá for a isakhiwo phezulu emiphakathini kwezilwane eyodwa uhlobo inkukhu umhlambi lwavivinywa. Izazi zesayensi ziye zakhomba (nakuba abalimi babazi wona eside phambi kwabo) ukuthi henhouse ebusa wokwehlayo eqinile nakho ngeke kusize nomphakathi, lapho ilungu ngalinye has a "isikhundla biosocial." Ngaphezu leli gama ukusetshenziswa kwansuku kanye nesayensi waba yikho kokubili inkulumo imfashini - ". Zingcofa oda" Igama elithi "i-alpha-ngabanye» owethulwa David L. Fur, wafunda ukuziphatha nezimpisi ngaphakathi iphakethe.
Ososayensi baye bathola ukuthi ezinye abayobe isilo - "-alpha" "beta", "i-gamma 'noma" omega ", wabeka lapho ngizalwa futhi kuncike isethi ethile hormone. Abanolwazi inja ochwepheshe ukweluleka nalabo abafuna ukukhetha inja ne izimfanelo lokulwa, elikhulu pozvenet okhiye nenqwaba nomdlwana: ngubani akesabi, futhi ukubhonga futhi bashesha ku okhiye, futhi alpha ngabanye. Ukuqaphelwa pack impisi luye lwabonisa ukuthi i-alpha kwabesilisa aqukethe ethathe Bitches eziningana "ehlonishwayo". Ekwabeleni kwabo besilisa impango-alpha lokuqala ithatha izinsalela zokudla kakhulu futhi ephatha abesifazane babo. Khona-ke uvumelane beta, gamma bese abantu, abantu we omega esifanayo uthola izinsalela. Kodwa kukhona izimo lapho iphakethe ubuswa kumuntu wesifazane-alpha. Ngubani yena?
Engalungile ngeke extrapolate kubonakale njengenhlangano besilisa-alpha. Ngo ethathe nabesifazane akukho ubuhlobo bobulili owesilisa noma ngokobulili. Yebo, yena akudingeki lokhu. Alpha ngabanye -, ngaphezu kwakho konke, umholi unamandla negunya emphakathini yabo. Sokungena ngemvume umholi we isilwane akuyona inombolo sobuhlobo bobulili, futhi isimo esithile. Ngo kwabesilisa (ngakho ngaphambilini Mother Nature), into esemqoka - baphonse inzalo yayo abantu abaningi ngangokunokwenzeka sesizalo, futhi ngaleyo ndlela dlulisa ahlukene lokhu ngezakhi ezingamaqoqo. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi ungowesilisa eziphila njalo uzama ukuthola isithembu, ngaphandle ukuthi kuvela ukuthi akusiwona wonke, kodwa kuphela besilisa-alpha. Abesifazane Kuyathakazelisa akuyona ubuningi kodwa izinga: ukhethe ngangokunokwenzeka le genotype elilungile, okunikela izingane zakhe. Ngakho-ke i-alpha zesifazane ekhetha besilisa. Lokho kusuke kungelona nomuntu wesilisa-alpha, kodwa - ukukhetha kwakhe.
Iphutha ukucabanga ukuthi u-alpha kuyinto enhle kunazo (ngomqondo besilisa) zesifazane ngabanye. Kunalokho, isikhalazo ezibukwayo - kuwuphawu okuzala. Beta- futhi gamma-izinyoni ezinhle phambi isibungu ngokufuzula umholi isithembu, iduna-alpha, futhi, njengoba isifinyelele oyifunayo, beseyama azithele ngabandayo yabo: ngaphezulu futhi akudingeki. Alpha besifazane akukhona anjalo. Wayengeyena okuqukethwe isilwane, okuyokwenza imvuthuluka zesihe inkosi yakhe - yena ulwela ukuba senkosikazi.
Libuye ayilungile ukucabanga ukuthi alpha-zesifazane - silwane bahilizisane kakhulu futhi vociferous ephaketheni. Ngethukile, ukuziphatha akahlanye ingaphezu uphawu yokungazethembi kwangaphakathi, sokuthuthukisa yesimo esiphansi ngu ubunjalo "kuphangwa" nokululazeka ababuthakathaka nakakhulu. Ngakho liziphathe gamma ngabanye, edlala kwi sokulahlwa abamnene Omega. Alpha lensikazi kalula ngumuntu wesithunywa enokuzethemba nabanomusa inkulumo. Ubukeka ezolile ngisho nasezimweni okungenangqondo kakhulu futhi uzilungise kahle, ngisho noma umhlambi ubhekene nezikhathi ezinzima.
Ngingaba uthumele kwencazelo "-alpha ngabanye" umphakathi wabantu? Ngakolunye uhlangothi, sonke babevela emhlabeni isilwane, futhi iqoqo othize wama-chromosomes, obhekene izimfanelo ubuholi kithi ukhona. Ngakolunye uhlangothi, isakhiwo phezulu somphakathi wesintu eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo emhlambini isilwane. umuntu ngamunye edlala izindima ezahlukene microcommunity ezahlukene - emkhayeni, emsebenzini, phakathi kwabangane, amaqembu. Enkulumweni yansuku zonke, omisiwe igama "-alpha besilisa", okuyinto osetshenziselwa umakhonya, umnqobi izinhliziyo zesifazane. Nokho, ntu "-alpha" owesifazane, akadingi amadoda lokuwina isikhundla emphakathini - isifinyelele intelligence yayo, ukungagunci, kokuthola igunya lakhe.
Imfundo eyisisekelo jikelele. Uhlelo Est imfundo eyisisekelo
Sodium phenate: Ukulungiselela, Properties Chemical
Sezibalo English Dzhordzh Bul: Biography, umsebenzi
Imvula Acid nasemiphumeleni yaso
Izimonyo Italian Egia: Izibuyekezo ochwepheshe
Ukubhala diploma. ukubhalisa
Ukukhangisa umsebenzi nomphumela waso
Isimila Benign - fibroids lesizalo. Izimiso eziyisisekelo nokwelashwa kwayo
Amaphethini kokuphazanyiswa. Imigomo esiphezulu kanye esincane
Waterpark eChisinau - ephelele iholidi
Okufanele ukwenze nengane
Laser amazinyo mhlophe
Iziphi izinzuzo sokuguga impesheni kanye udaba lwabo
Amadombolo nge izinhlanzi: iresiphi of inhlama ofakwe